पत्रकार रबि लामिछानेलाई जेल हाल्नुपर्छ ३ करोड नेपालीले हेर्नै पर्ने (भिडियो सहित्) – पुरा पढ्नुहोस्……
पत्रकार रबि लामिछानेलाई जेल हाल्नुपर्छ ३ करोड नेपालीले हेर्नै पर्ने (भिडियो सहित्)
काठमाडौं । मुलुकले निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्यो र निर्वाचनपछि मुलुक विकास हुन्छ भन्ने अड्कलबाजीहरु चलिरहँदा एउटा कुरा भन्न चाहान्छु । चाहे निर्वाचन होस् वा सरकार परिवर्तन होस् यो मुलुकको कुनैपनि मन्त्रालय सचिव बिहिन भएको छ र ? कुनै पनि विभाग महानिर्देशक विहिन भएको छ र ?
कुनै पनि कार्यालय प्रमुख बिहिन भएको छ र ? फेरी किन यो सरकार परिर्वतन,सत्ता समिकरणले विकास निमार्णलार्य प्रभाव पार्छन ? विषेश गरी संरचना निमार्णकै कुरा गराँै । यतिबेला सबै भन्दा बढि हुनुपर्ने सडक निमार्ण र सडक मर्मत कार्यको गति हेर्नुस त ?
न पानी पर्छ न आर्थिक बर्ष अन्त्यको चटारो । अहोरात्र काम गरेर सडक निर्माण वा मर्मत गरिनु पर्ने होइन ? तर मौसमले साथ दिदाँ समय लिएर काम ग¥यो भने त सडक राम्रो बन्छ, टिकाउ बन्छ र यसरी बलियो सडक बनायो भने फेरी सडक मर्मत भनेर खाने के शिर्षकमा ?
असार मसान्त वरपर रातारात काम हुन्छ, यतिखेर भने आराम चल्छ । अनि कसैलाई प्रश्न सोध्नुपर्छ जवाफहरु रेडिमेड छन् । विभाग मन्त्रालय कार्यालय सबका सबसँग जवाफ रेडिमेड छन् ।
विभाग मन्त्रालय कार्यालय सबका सबसँग जवाफ ओठैमा रेडि छ । ज्यादै बाठो, चिटिक्क मिलाएर, कुनै विवादमा नपर्ने गरी बोल्न सक्ने एक थान प्रवतmा राखिदिएपछि सकियो । सिष्टम राम्रो हुनु परेन,काम राम्रो हुनु परेन,सेवा उत्कृष्ठ दिनु परेन तर प्रवतmा गतिलो चाहियो जसले हात्ति पनि लुकाउन सकोस् ।
शहरको कुनै गल्लीको मिठाइ पसलेले बनाएको जेरीको टुक्रामा परेको झिंगाको अनुगमन हुन्छ,पसले जेल जान्छ,पसलमा ताला लाग्छ तर यो मुलुकका बाटाघाटा पुल आदिको अनुगमन कहिल्यै हुँदैनन् । कमजोर संरचना बनाउने ठेकेदार कम्पनी र तिनका मालिकहरुको लिष्ट कहिल्यै ब्ल्याक हुँदैन ।
न सडक बलियोे बन्न जरुरी हुन्छ न सामान टिकाउ र असल प्रयोग हुन जरुरी हुन्छ , न कमजोर संरचना बनाउनेहरुको लाइसेन्स खारेज हुन्छ न राज्यकोषको दोहन गरेर उधुम मच्चाउनेहरु जेल जान्छन् ।
उल्टै यस्ता मानिस र यिनका कम्पनीहरुले अझै ठुला ठेक्का पाउँछन, राजनीतिक दल छानी छानी चन्दा दिएर राजनीति गर्छन र जनताबाटै लुटेको पैसा बाँडेर चुनाव लड्छन्, जित्छन् मन्त्री बन्छन् र राज्यले दिएको गाडी घर र सुरक्षा पाएर फरर् झण्डा हल्लाउँछन् । जनता उनैले बनाएको खाल्डो र हिलोबाटोमा उसैलाई बोकेर गुडेको गाडीबाट उडेको धुलो खाइएला भनेर मास्क लगाएर हिँड्छन् बषौँ सम्म , चुपचाप र निरन्तर ।
यो भिडियो तपाइलाई कस्तो लग्यो , राम्रो लागे शेयर गर्न नभुल्नुहोला सधै हाम्रो फेसबुकपेजलाई लाइक गर्नु भाको छैन भने अहिले लाइक गरिहल्नुहोला , ताकी हाम्रा यस्तै रमाइला पोस्टहरु update लिनको लागि ..
Prevरौतहटको सन्तपुरमा नमुना बस्ती निर्माण: ‘धुर्मुस भगवान्, गाउँ स्वर्ग
Nextहाँस्दाहाँस्दै पेट दुखेर हैरान हुने अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट चुट्किला हरु
फुट्ने भयो बाम गठबन्धन…,दुई दिनमा भारतले खेल्यो यति ठुलो खेल ..(हेर्नुहोस् भिडियो)
नेपाली ताराबाट आफुलाई चिनाउन सफल गायिका जलजला परियार मृत्युलाइ जित्ने प्रयासमा (भिडियो हेरेर सक्दो शेयर गरौ)
भारतद्वारा नेपालको दाबी अस्वी’कार, नेपालको भू-भाग नमिचि’एको भारतको जि’किर